स्काइपीको भिडियो कल रिसिभ गर्दा स्मार्टफोनका गोप्य डाटा खतरामा ! (भिडियो) - Gokarna News
स्काइपीको भिडियो कल रिसिभ गर्दा स्मार्टफोनका गोप्य डाटा खतरामा ! (भिडियो)
एजेन्सी– जुन गतिमा प्रविधिबाट हाम्रो निर्भरता बढिरहेको छ, त्यसैगरी यसका नकारात्मक असरहरु पनि देखिन थालेका छन् ।
यही क्रममा चर्चित भिडियो कलिङ्ग एप स्काइपीसँग सम्बन्धित ताजा घटना सार्वजनिक भएको छ । स्काइपीको एन्ड्रोइड एपका माध्यमबाट स्मार्टफोनलाई अनलक नगरिकनै प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा चोरी भएको दाबी गरिएको छ ।
न्युरोड क्षेत्रमा आजदेखि स्मार्ट पार्किङ शुरु
रमेश र दीपिकाको चलचित्र ‘ऐश्वर्या’ फोपीमा हेर्न सकिने